China Model No: Chinese Manufacture Automatic Control YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine ifektri nabahlinzeki | Hlanganisa phezulu
I-baler yensimbi ye-Scrap
Inombolo Yemodeli: Isilawuli Esizenzakalelayo SaseShayina I-YDJ Series Hydraulic Scrap Metal Shear Machine Baler
Isimiso sokusebenza somshini we-YDJ wochungechunge lwezinsimbi ze-shear baler:
1. Inqubo yokugunda: qala injini kuqala, shayela iphampu kawoyela ukuze uzungezisa ukunikezwa kukawoyela, bese uthumela okokusebenza endaweni efanele. Cindezela inkinobho yokugunda, cindezela isilinda esibalulekile, futhi isilinda sokugunda sihamba ngokulandelana ukuze sibone ukucindezelwa nokugunda. Ngemva kokuba ukugunda sekuqediwe, ophethe ithuluzi kanye nomshini wokunyathelisa babuyela esimweni sokuqala sokulinda, futhi ukugunda kokuqala sekuphelile.
I-2, imodi yokusebenza: ngenxa yokusetshenziswa komkhawulo wokuhamba wokushintsha indlela emibili, unhlangothi olubili lwe-shear lungaxhunywa ngokuzenzakalelayo, ukujikeleza okuzenzakalelayo.
Ngaphezu kwe 25+ iminyaka yokuhlangenwe nakho kokukhiqiza, ukuhlinzeka ngezifiso ezingaphezu kuka 3000+ usetha izikimu zensimbi ezilahliwe zokugaywa kabusha.
Umshini womshini wokushefa wensimbi we-Hydraulic scrap unezinzuzo ezinhle embonini yokugaywa kabusha kwensimbi. Namuhla, ukushoda kwezinsiza ezikhona kuyinkinga izwe ngalinye elibhekene nayo. Akunandaba ukuthi amazwe asathuthuka noma athuthukile, indlela yokwenza kabusha engcono kakhulu kuhlale kuyisihloko esishisayo. Ngakho siklama zonke izinhlobo zomshini we-hydraulic scrap metal shear baler ukuze amaklayenti ethu abhekane nezinsimbi zawo ezilahliwe ukuze ahlangabezane nezidingo zamakhasimende ethu.
Umshini we-Hydraulic scrap metal shear baler, usetshenziswa kabanzi kuzo zonke izinhlobo zezinto ezilula nezincane, insimbi yokukhiqiza neyokuphila, izingxenye zesakhiwo sensimbi elula, zonke izinhlobo zensimbi engenansimbi (insimbi engagqwali, i-aluminium alloy, ithusi, njll.) ukupakishwa kokucindezela nokugunda; Noma imfucuza ngqo onomfutho emaphaketheni.
Ngokungafani namabhali ensimbi, lo mshini we-hydraulic scrap metal shear baler ungakwazi kokubili ukucindezela nokugunda izinsimbi ezilahliwe.
●Idrayivu ye-hydraulic, ukusebenza okushelelayo futhi akukho msindo, isivinini esisheshayo sokukhipha, amandla amakhulu e-extrusion, i-compact block, akulula ukuyihlakaza.
● Sebenzisa ipuleti lensimbi elijwayelekile kanye nobuchwepheshe bokushisela obusezingeni eliphezulu, izingxenye eziwumshini ziqinile, izinga lokuhluleka eliphansi kanye nempilo ende yesevisi.
●Isistimu yokupholisa ingafakwa ukuze kuthuthukiswe ukusebenza okuqhubekayo kwesisetshenziswa kanye nokunciphisa izinga lokuhluleka. Uhlelo lokupholisa lungahlukaniswa lube ukupholisa amanzi kanye nokupholisa umoya.
●Uphawu lwesilinda luthatha indandatho ye-GRAI engenisiwe, esebenza kahle yokuvala nokumelana nokucindezela okuqinile.
●Ukufaka kalula, unyawo oluncane, akukho sisekelo, isisekelo, njll. Ukusebenza okulula, okukhiphekayo, imodi ezenzakalelayo.
●Ukukhipha okubandayo akushintshi into yensimbi futhi kuthuthukisa izinga lokusebenzisa.
●I-coefficient iphezulu kunephakheji yesando evamile, ukupakishwa komshini, njll.
●Ukulawula okuzenzakalelayo kwe-PLC kulula ukuyisebenzisa nokuyinakekela.
● Umshini wethu we-hydraulic scrap metal shear baler ungakusiza ukuthi ulondoloze abasebenzi, uthuthukise ukubuyiswa kwensimbi, ukhuphule intengo yokuthengisa futhi uthuthukise inzuzo.
●Ingakusiza ukuthi wonge indawo yokusebenza, inenzuzo kubaphathi besayithi.
●Amaklayenti angakwazi ukwenza ngendlela oyifisayo ukucaciswa kwamaphakheji nosayizi ngokwezidingo zawo zokuhamba noma zokulondoloza.
●Ingakusiza wehlise izindleko zokuhamba, uthuthukise ukusebenza kahle kwakho
2. Imodi yokusebenza: ngenxa yokusetshenziswa komkhawulo wokushintsha ukuhamba ngezindlela ezimbili, ukushaywa kwe-shear okubili kungaxhunywa ngokuzenzakalelayo, ukujikeleza okuzenzakalelayo.
Imodeli I-Max Cutting Force (Ton) Cindezela usayizi webhokisi(mm) Usayizi webhali(mm) Imvamisa ye-Shear(izikhathi/umzuzu) Amandla(kw)
YDJ-4000 400 4000×1500×800 500×400 4-7 2x45
YDJ-5000 500 5000×2000×1000 600×500 4-7 3 × 45
YDJ-6300 630 6000×2200×1200 720×650 4-7 4 × 45
Umshini wethu we-Hydraulic Scrap Metal Shear Baler Machine uhlinzeka ngezingxenye zomshini womkhiqizo odumile, besisebenzisana nabaphakeli abaningi abadumile emhlabeni wonke, njenge-SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI njalonjalo iminyaka engaphezu kwe-10.
Imodeli encane ye-YDJ Series Hydraulic Scrap Metal Shear Baler Machine ingavikelwa kahle esitsheni esisodwa esingu-40 HQ. Uma sihamba ngesikebhe, sizovala i-poncho kanye nedekhi yokulayisha ukuze sivikele umshini wethu we-YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine.
Buka Umshini we-Hydraulic Scrap Metal Shear Baler Wokugaywa Kabusha Kwensimbi Kuyasebenza!
Okwedlule: Imodeli No: NY Series hydraulic hot ukuphotha umshini wokuvala
Olandelayo: Inombolo Yemodeli: I-Chinese Manufacture Manual Control Y82 Series Vertical Hydraulic non-metal Press Baler Machine
Umshini we-Alligator Shear
Umshini we-Hydraulic alligator Scrap Shear
I-Scrap Metal Compactor, Umshini we-Aluminium Foil Baler, I-Y81 Hydraulic Baler, I-Pop-Top Can Baler Equipment, I-Leaf Compactor kanye ne-Baler, I-Cardboard Baler eyenziwe ekhaya,